China Pocket igama umnini ikhadi ishishini ityala ID Ityala ifolda isikhwama isipaji kwiofisi yeshishini isikolo ukusetyenziswa yonke imihla amadoda abafazi Abavelisi kunye Suppliers | Camei Ele&Stationery
Igama lepokotho yekhadi lomphathi wetyala leshishini Isazisi setyala letyala isipaji se-ofisi yeshishini esikolweni esisetyenziswa mihla le kubasetyhini abangamadoda
Umba NO. : 2611 Igama lomphathi wekhadi
Material: PU ngesikhumba
Umbala:Brown, bomvu, fuchsia
Ubungakanani: 105 * 70 * 8MM
Ukupakishwa: 1pcs / PP bag
Le Ca-Mei ingxowa yekhadi ephathwayo kwabo bafuna ukulungelelanisa iipokotho zabo. Awuyi kuzisola ngokuthenga le ngxowa yekhadi.
Ngophando lwethu, phatha lula kwaye uhlawule ngokulula, imali ayidumanga njengangaphambili, isipaji sesiqhelo esikhulu epokothweni yakho asisafaneleki kubomi bethu banamhlanje. Ke sifumana iindlela ezingcono zokuphatha kunye nokukhusela amakhadi akho kunye nemali. Abaqulunqi beCa-Mei babeka umbono wabo wokutshintsha ubomi kwesi sipaji, siphuhliselwe ukwanelisa abantu abafuna ukuphatha imali kunye namakhadi abo ngokulula, injongo yethu yokwenza ubomi bubengcono.
Umthamo omkhulu- Le ncwadi yekhadi leshishini liza kunye ne-10 ye-PVC evulekileyo ye-PVC yamaphepha aphindwe kabini kunye neepokethi ze-2 zecala, zinokubamba amakhadi oshishino angama-50 okanye amakhadi ekhredithi (kuxhomekeke kubukhulu bekhadi). Elona xabiso liphezulu lifanelekileyo: 3.6" x 2.2" Isebenza kumakhadi enqaku, amakhadi eshishini kunye nawebuqu, i-ID kunye namakhadi etyala, njl.
Iyaphatheka kwaye ifanelekile- Imilinganiselo: 105 * 70 * 8 MM. Iprofayile encinci kunye noyilo olunobunzima obulula lwenza ukuba lo mphathi wekhadi leshishini ube lula ukuthwala. Gcina amakhadi akho eshishini emahle, ecocekile kwaye ekufuphi ngalo lonke ixesha.
Kulula ukujonga kwaye ufumane amakhadi-Imikhono yePVC ekumgangatho ophezulu ibubungqina bokukrwela ukunika ingcaciso ecacileyo ukuze kube lula ukuyijonga. Amaphepha ali-12 ngokupheleleyo. Iphepha ngalinye linezinto zokubeka ezi-3 ezikuvumela ukuba ubeke amakhadi ngasemva kuba amaphepha anamacala amabini abonakalayo.
Izinto ezihlala ixesha elide-Ikhadi lethu leshishini umququzeleli yenziwe nge-PU enganyangekiyo emanzini kwaye inxibe-resistant, iqiniswe ngemiphetho evaliweyo kunye nemikhono yekhadi leshishini lePVC elihlala ixesha elide.
Imbonakalo yobungcaliI-e-Classical emnyama enenkangeleko entle necekethekileyo, isiphathi sekhadi lencwadi sinokukwenza uthandeke ngakumbi kunye nethuba. Sisipho esifanelekileyo kusapho lwakho, abahlobo, abathengi, oogxa bakho, okanye njengesikhumbuzo senkampani!
Unisex-Ngenxa yoyilo lwabo oluthambileyo kunye nolwakhiwo lwesikhumba olugudileyo, ezi ziibhegi ezibhityileyo ezidumileyo zabasetyhini kunye namadoda. Benza imibono yesipho esihle kubahambi ebomini bakho! Ilungele abantu bayo yonke iminyaka.
Inkqubo yezobuchwepheshe- Ipleyiti yovavanyo lwangaphambi kokubeleka- Ukusika izinto- Ukukhutshwa kwezinto-Iglue-Ukuthunga-Ukupakisha
Ulawulo lwemeko-Izixhobo zokujonga&neziqinisekiso- Iworkshop QC ijonga- Imveliso yokuhlola umhloli- Ugqityiwe ukukhangela umphathi- Umphathi weWarehouse khangela- AQL hlola
Ngaphambili: Intengiso eshushu i-mini binder pouch ene-elastic band uziphu ipeni yokuvala & necasi eqinileyo yepensile
Okulandelayo: Ibhegi yesandla ebotshiweyo iyabengezela ibhegi ecacileyo yeplastiki yesandla ecacileyo yePVC yokuthambisa ibhegi ethwala ebhegi yokuhamba elwandle
Umphathi wekhadi lepokotho
Isingxobo samagxa esinohlengahlengiso lwemitya yamagxa...